Farriimo Jacayl Oo Qalbiga Taabanaya - Aayaha
Home»XIKMADO»Farriimo Jacayl Oo Qalbiga Taabanaya
1. Mar kasta oo aan ku eego, waan farxaa, waana fekeraa sababtoo ah ma sameyn Karin wax ka wanaagsan inaan ku helo adiga, waanku jeclahay xabiibti/xabiibi.
2. Waxaan kugu riyoonayay kahor intaanan kula kulmin, aad ayaana hadda ugu faraxsanahay inaan ku helay gacaliye/gacaliso.
3. Waqti kasta oo aan wax rajeeyo, waxaan rajeeyaa inaan wadajir ahaano inta nolosheena ka dhiman. Waan ogahay inay taas rumoobi doonto maxaa yeelay mar hore ayaadba ku noleeyd qalbigeyga, waanku jeclahay.
4. Madaaama uu qof bini aadam ah noolaan Karin hawo la’aan, anigana ma noolaan karo la’aantaa, waanku jeclaan doonaa intay nafta iga baxayso.
5. Kuuma ballan qaadi karo inaan kula joogayo intaan noolahay, kuma siin karo dunida, magacaaga kuma qori karo cirka balse waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku jeclaan doono oo aan daacad kuu ahaan doono intaan noolahay.
6. Waadku mahadsantahay sidaad ii garab istaagtay oo aad ii taageertay xittaa marka ay dunida oo dhan iga soo horjeesatay, sanadahaas oo idil kadib waxaan ku faani karaa inaan ku dhaho gacaliye, waxaad tahay halyeygeygii, waanku jeclahay.
7. Haddii aan ahaan lahaa dhibic kamid ah ilmadaada waxaan ku dhici lahaa bushimahaaga. Balse haddii aad ahaan lahayd ilmadeyda waligey ma ilmeyn lahayn sababtoo ah waxaan ka baqayaa inaan ku waayo.
5 Calaamadood Oo Uu leeyahay Ninka Wanaagsan.... Ma Tahay Nin Wanaagsan?